PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - Kuqokwe umkhandlu wabesifazane
Kuqokwe umkhandlu wabesifazane
Babongwe ngeqhaza labo kwezentuthuko
UQHAMUKE nohlelo olungakaze lube khona uMasipala waKwaNongoma, enyakatho yeKwaZulu-Natal, uqoka amalunga omkhandlu wabesifazane ngeledlule.
Lo mkhandlu wabesifazane wemukelwe, wagcotshwa yiMeya yaKwaNongoma, uMnu Albert Mangaqa Mncwango mhla ziyisi-7 kwephezulu. Enye yezinto ezenze lo masipala waqoma ukwakha lo mkhandlu, wukubona izingqinamba ezibhekene nabesifazane abafisa ukuzidingida, kubalwa ukudlwengulwa kwabesifazane asebekhulile nokuhlukumezeka kwabo.
Lo mkhandlu wabesifazane wakhiwe ngamalunga anesibalo samakhansela amaqembu ezepolitiki amelwe kumasipala - nakuwona kunemeya, isekelameya, usomlomo, amalunga esigungu namakhansela ngokwamaqembu ehlukene.
Umcimbi wokugcotshwa kwalo mkhandlu, bewuthanyelwe ngomakadebona besifazane, amakhosi, amaphoyisa, yizinhlangano ezingayenzi inzuzo neminyango kahulumeni ehlukene. Umkhandlu wabesifazane uzwakalise ukukhathazeka ngokushoda kwamanzi emiphakathini yaKwaNongoma ngenxa yesomiso, okuba nomthelela ekuhlukumezekeni kwabesifazane nezingane ngoba behamba amabanga amade beyokha amanzi emifuleni nasemihosheni.
La manzi bawathwala ngamakhanda, enjalo nje kawahlanzekile. Umkhandlu ucele umasipala ukuba ungenelele ekuhlinzekweni komphakathi ngamanzi aphuma kuMasipala wesiFunda iZululand ukuze kunqandeke ukuthengiswa kwawo.
Unxuse ukuba kubhekwe nezinhlelo ezingathuthukisa abesifazane kwezamakhono ehlukene okubalwa ezokusikwa kwengqephu nokukhangiswa kwayo, ezokupheka namakhono kwezamabhizinisi. UMnu Mncwango ubonge ithimba labesifazane ngeqhaza labo kwezentuthuko nokumeseka ezifungweni zakhe zokuhambisa izidingo kubantu.
Uthe akangabazi ukuthi lo mkhandlu wabesifazane uzoba lusizo olukhulu KwaNongoma kwazise inzalabantu inamandla nentshisekelo ekwenzeni izinto ziphumelele.
UBUNGAFUNGA ukuthi bebeqeda kwethweswa iziqu enyuvesi abesifazane baKwaNongoma abaqokelwe emkhandlwini wabesifazane kuMasipala waKwaNongoma.